ကောင်းကျိုးများ -လေဝင်လေထွက်ကောင်းမွန်သည်။ အဆိပ်ဓာတ်ငွေ့များကိုစစ်ထုတ်နိုင်သည်။ အပူကိုထိန်းထားနိုင်ခြင်း၊ ရေစုပ်ယူနိုင်သည် ရေစိုခံနိုင်; ပြောင်းလွယ်ပြင်လွယ်; မသက်သာဘူး၊ အလွန်ကောင်းသောနှင့်အတော်လေးပျော့ခံစားရ; အခြားမျက်နှာဖုံးများနှင့်နှိုင်းယှဉ်လျှင် texture သည်ပေါ့ပါးသည်။ အလွန် elastic, ဆန့်ပြီးနောက်လျှော့ချနိုင်ပါတယ်; နိမ့်သောစျေးနှုန်း, အစုလိုက်အပြုံလိုက်ထုတ်လုပ်မှုများအတွက်သင့်လျော်သော။
ပါ ၀ င်သည့်ပလပ်စတစ်နှာခေါင်းကလစ်၊ မျက်နှာအမျိုးမျိုးတို့ကိုတပ်ဆင်ထားသည်။
အထီးကျန်အလွှာအောက်, ထိရောက်သောရှင်းလင်းရေးမေးရိုးအသေ Angle ။
ဖယ်ရှားနိုင်သော Non- မြုံမှုန့် - အခမဲ့လက်အိတ်
ပွတ်တိုက်မှုတိုးမြှင့်ဖို့လက်အိတ်၏မျက်နှာပြင်အနည်းငယ် pockmarked ဖြစ်ပါတယ်
၁. ၇၅% အရက်လက်သန့်ရှင်းဆေးအညစ်အကြေးဆေးဂျယ်လ်သည် ၉၉.၉၉% ထက်ပိုသောလူများကသင်၏လက်ကိုမထိခိုက်စေပါ
3. နူးညံ့သိမ်မွေ့။ နာကျင်ကျိန်းစပ်ခြင်းမရှိသောအရေပြားကိုမထိခိုက်ပါ
4. Gel texture၊ သင်သည်ပမာဏကိုအလွယ်တကူထိန်းချုပ်နိုင်သည်။ သယ်ဆောင်ရလွယ်ကူသေးငယ်တဲ့အရွယ်အစား
Kn95 နှင့် N95 အသက်ရှူကိရိယာများသည်တူညီသောကာကွယ်မှုအဆင့်ရှိသော်လည်းမတူညီသောနိုင်ငံများ၏စစ်ဆေးမှုစံနှုန်းများကိုသာလိုက်နာသည်။ Kn95 မျက်နှာဖုံးများသည်တရုတ်စံနှုန်းများနှင့် N95 မျက်နှာဖုံးများသည်အမေရိကန်စံနှုန်းများကိုလိုက်နာသည်။ ၄ င်းတို့ကိုအဆီပြန်မှုမရှိသောအမှုန်များ (စမ်းသပ်မှုအတွက်ဆိုဒီယမ်ကလိုရိုက်အမှုန်များ) အတွက်ကာကွယ်မှုသည် ၉၅% ထက်မနည်းပါ။
စွန့်ပစ်နိုင်သောအကာအကွယ်အဝတ်အစားသည်အတန်းအေ (သို့) ကူးစက်ရောဂါလူနာများနှင့်အဆက်အသွယ်ရှိပါကလက်တွေ့ ၀ န်ထမ်းများဝတ်ဆင်သည့်တစ်ခါသုံးအကာအကွယ်ပစ္စည်းများကိုရည်ညွှန်းသည်။
အရည်ပျော်သောအထည်သည်မျက်နှာဖုံး၏အဓိကပစ္စည်းဖြစ်သည်။ အရည်ပျော်လွင့်သောအထည်၏အဓိကပစ္စည်းမှာ polypropylene ဖြစ်သည်။
နာမတော်ကိုရည်ညွှန်းသကဲ့သို့, ကနှာခေါင်းတံတားပေါ်မျက်နှာဖုံး fix ဖို့မျက်နှာဖုံးမှာအသုံးပြုတဲ့ပါးလွှာရော်ဘာချွတ်သည်။
ထို့ကြောင့်နှာခေါင်းတံတားကိုပလတ်စတစ်တံတားအပြည့်ဟုခေါ်သည် - နှာခေါင်းနံရိုး - နှာခေါင်းတံတား။
ကျွန်ုပ်တို့သည်မျက်နှာဖုံးများ၊ ပိုးသတ်ဆေးများ၊ ဘက်တီးရီးယားပိုးမွှားများဖြေရှင်းခြင်း၊ ဇီဝဗေဒဆိုင်ရာဘက်တီးရီးယားများ၊ တိရစ္ဆာန်ဆေးကုသရေးမူးယစ်ဆေးဝါးသုတေသနနှင့်ဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်မှု၊ အဆင့်မြင့်နည်းပညာလုပ်ငန်းများ၏ထုတ်လုပ်မှုနှင့်ရောင်းဝယ်မှုများတွင်ပါ ၀ င်သောပညာရှင်တစ် ဦး ဖြစ်သည်။
လိပ္စာ: Weai ၏အနောက်ဘက်နှင့် Yongkang လမ်း၏မြောက်ဘက်၊ Weifang စီးပွားရေးဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်မှုဇုန်